လောကမှာ လူအများစုဟာ လောဘကြောင့် ဘ၀ကို အမှောင်ကျနေတာမျိုးတွေမဖြစ်သင့်ဘူး။ စိတ်ပြတင်းတံခါးကို အသာလှစ်လိုက်ပြီး အလင်းတစ်စကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါ။ ဘယ်အရာကများသင့်ကို စိတ်ချမ်းသာမှုအမှန်တကယ်ပေးနိုင်မှာလဲ။ ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အလင်းရဲ့ အားကိုသာမလွတ်တမ်းဆုတ်ကိုင်ထားလိုက်စမ်းပါ သင်ဟာ မကြာမီမှာ တောက်ပလာမှာ အသေအချာပါ။
ဟော ကျွန်တော်နေရမယ့် အိမ်ရှေ့ကိုရောက်ပြီထင်ပါရဲ့။
ခိုင်ခန့်တဲ့ ခြံတံခါးအကြီးစားဖြင့် မွမ်းမံထားသော ဥရောပ style တိုက်ဖြူဖြူလေးရှေ့သို့အရောက်မှာ ကားထိုးရပ်သွားသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပူပူနွေးနွေးသခင်လေးက ခြံရှေ့မှာ ဟွန်းတတီတီတီးပြီး အသံပေးနေသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးမြင်ကွင်းအနေနဲ့ခြံတခါးဝမှာ တံမြက်စည်းလှည်းနေသော အသားမည်းမည်းကုလားတစ်ယောက်ကိုစတင်တွေ့ရပါသည်။
“ဟေ့ကောင်ရာဂျား၊ တံခါးလာဖွင့်လေ။ ဘာကြည့်နေတာလဲ”
ရာဂျားဆိုသော လူက တံမြက်စည်းကိုင်လျှက် ခြံဝန်းတံခါးရှေ့သို့ အပြေးအလွှားလှမ်းလာကာ
“ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုလေး” ဟု ပျာပျာသလဲ ပြောရင်း ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သွားလေပြီ။
“အစ်ကိုလေး၊ ဘယ်က ခွေးလေးလဲ၊ ချစ်စရာလေး”
ရာဂျားကပြောပြောဆိုဆိုနှင့် Slide Door တံခါးကြီးကို တွန်းဖွင့်လိုက်တာမို့ အသံဗလံပေါင်းစုံဆူညံစွာ ထွက်ပေါ်လာပါတော့သည်။
“ဒုန်း . . .တ . . လုန်း . . ဒုံး . .၀ျုံး”
၀ုတ် . .၀ုတ် . .၀ုတ် လန့်လိုက်တာ ရာဂျားရာ၊ အချိုးမပြေမှုကလေးတွေက ဒီအိမကိုစရောက်တဲ့နေ့မှာ ပဲ ပေါ်ထွက်လာပါပြီ . .
ထိုစဉ်မှာပင် အိမ်ထဲမှာ ခါးကိုင်းကိုင်းနှင့်အဘွားကြီးတစ်ယောက် မျက်စိရှေ့သို့ ရောက်လာပါသည်။
ထိုအဘွားကြီးသည် အရပ်ပုပုလေးတွင် ဂုတ်ထောက်အထိ ဆံပင်ဖြူအရှည်ကျိုးတိုးကျဲတဲကို အသာဖြန့်ချထားပြီး မျက်နှာတွင်လည်းထုံးသုတ်ထားသလို Make up အဖွေးသားမှာ နှုတ်ခမ်းနီပါးလေးအား အရောင်တင်ထားသေးသည်မှာ အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် အကြည့်ရဆိုးလှပေသည်။
သူမက ကျုပ်ကို စူးစိုက်ကြည့်ကာ နှာခေါင်းတစ်ချက်ရှုံ့လိုက်ရင်း
“ကိုဖြိုး ၊ မင်းကတော့ တကယ့်အရှုပ်ထုတ်ကိုမှ အိမ်ခေါ်လာရသလား၊ ခွေးဆိုတာ အင်မတန်ညစ်ပတ်တဲ့အမျိုး၊ ချီးပါ သေးပေါက်အသေးစိတ်ကအစ အလုပ်ရှုပ်တဲ့ဟာကို မင်းမို့လို့ကွာ”
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ အဘွားကြီး ကျွန်တော်ည်း အမြင်ကတ်ကတ်နဲ့ သန့်နေတဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ် ဘယ်ညာနင်းလိုက်ပြီး ခေါင်းကိုအလျင်အမြန်ခါရမ်းပစ်လိုက်သည်။
“သွားပါပြီတော်၊ သွားပါပြီ၊ အခုမှ ခေါင်းလျှော်ထားတာ ခွေးသန်းတွေတော့ ကူးတော့မှာပဲဟင်၊ ခြေရာတွေလည်း ထင်ကုန်ပြီ၊ မနက်ကပဲ Polish တင်ခိုင်းထားတာ၊ အခုတော့ ခွေးခြေရာတွေ ခွေးသန်းတွေနဲ့ ညစ်ပတ်ကုန်ပါပြီတော် ကိုဖြိုး ”
အသန့်ကြိုက်သော အလှမက်ပုံရသော ထိုအဘွားကြီးက ကျွန်တော့်ကို အပြတ်ရှုတ်ချရင်း သူ့သားတော်မောင်အား ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်လေသည်။
“မေမေကလည်းဗျာ၊ စိတ်ညစ်ပါတယ်။ခွေးလေးတစ်ကောင်မွေးမိပါတယ်။ ဒီခွေးက အဲဒီဆိုင်မှာဈေးအကြီးဆုံးခွေး၊ သိန်းချီတန်တဲ့ခွေးပါ၊
“အေး မင်းသဘော၊ မင်းသဘော၊ မင်းတို့က ငါအိုပြီဆိုပြီး မခန့်လေးစား၊
ငါ့အိမ်မှာ မင်းတုိ့စိတ်ကြိုက်လုပ်ကြတာ၊ လုပ်ချင်တာလုပ်ကြပါ ကြောက်ပါတယ်၊ ”
အဘွားကြီးက ပါးစပ်က တရစပ်မြည်တွန်တောက်တီးလျှက် စီးထားသော ခွာမြင့်ဖိနပ်သံတဒေါက်ဒေါက်ဖြင့် ခါးလေးကိုင်းကာ အိမ်ထဲသို့ တရွှေ့ရွှေ့ဝင်သွားလေသည်။
ဟောဗျာ . .သူ့အသက်အရွယ်ကြီးနဲ့မှ မလိုက်ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာကြီးကို စိတ်တိုင်းကျအလှဆင်ထားတဲ့သူကများ၊ လုပ်ချင်တာလုပ်ကြပါတဲ့
၀ုတ် . .-၀ုတ် . .၀ုတ် ရယ်ရတယ်ဗျာ လူတွေ လူတွေ အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးဘူးဆိုတာ ဒါမျိုးပဲနေမှာ . .တရားကျဖို့ ကောင်းလိုက်တာ၊ ကျုပ်တို့ခွေးတွေကို ရွံသတဲ့ဗျာ၊ ၀ုတ် . .၀ုတ် . . ၀ုတ်
လူတွေ လူတွေ အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးဘူးဆိုတာ ဒါမျိုးပဲနေမှာ . .တရားကျဖို့ ကောင်းလိုက်တာ၊
ကျုပ်တို့ခွေးတွေကို ရွံသတဲ့ဗျာ၊ ၀ုတ် . .၀ုတ် . . ၀ုတ်
ကျွန်တော်သည်းခံခြင်းအဈိုးနေစဉ်မှာပဲ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အသံတစ်သံထွက်ပေါ်လာပါသည်။
“မောင်မောင် ထမင်းစားတော့မလား၊ တစ်ခါတည်းပြင်လိုက်မလို့”
ထမင်းဆိုတဲ့အသံကြားတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဗိုက်ဆာနေတာနဲ့ သခင်လက်ပေါ်က ဖတ်ကနဲခုန်ချရင်း မီးဖိုချောင်ထဲအပြေးဝင်သွားလိုက်တော့သည်။
“စားမယ်မဟုတ်လား၊ မောင်မောင်”ဟု ပြောပြောဆိုဆို နှင့်တည်ထားသော ဟင်းအိုးမီးခလုတ်ကို ပိတ်ကာ နောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။
“အမယ်လေး ခွေး . .ခွေးဟဲ့ခွေး မီးဖိုချောင်ထဲ ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ ဘယ်ကခွေးလဲ
ရှူး သွား သွား”
လာပြန်ပြီတစ်ယောက်။ ဘယ်လိုလူတွေ မှန်းမသိပါဘူး။
ငါ့ကိုမြင်တာနဲ့မတူသလို ဖြစ်နေလိုက်ကြတာ သူမပုံစံကိုလည်းကြည့်လိုက်ကြပါဦး၊
အကျီစုတ်၊ လုံချည်စုတ်အနွမ်းလူကလည်း မသပ်မရပ်၊
ဟိုရုပ်ရှင်တွေထဲကလို အိမ်မှာ အကူခေါ်ထားတဲ့ အလုပ်သမရုပ်၊ သူမနှင့်မလိုက်ဖက်လှသော စိန်နားကပ်ကြီးတ၀င်းင်းမှာ အကျီးတန်လှပေသည်။
“မမ၊ ဒါ အခုပဲ ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ခွေးလေးဂျက်ကီတဲ့၊ ဒီကောင်ကြီးက အရမ်းလိမ္မာတာ၊ ပြီးတော့အသန့်လည်းဘာကြိုက်သလဲမမေးနဲ့၊
ကျွန်တော်သူ့ကို ဆိုင်က ခေါ်လာပြီး ကားပေါ်တင်တော့ ဒီကောင်ကြီးက တော်တော်နဲ့ မတက်ဘူးဗျာ၊
နှာခေါင်းရှုံ့ချည်ရှုံ့ချည်နဲ့ ကားကိုလှည့်ပတ်နမ်းနေတာ၊ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူနမ်းတဲ့နေရာတွေကို လိုက်ကြည့်ပြီး အဖြေရှာတော့ တရားခံက ဓာတ်ဆီပုံးကြောင့်ဗျာ၊ ကားထဲက ဆီပုံးကအနံ့မလုံဘဲ အနံ့နည်းနည်းထွက်နေလို့ ကားစီးဖို့ကို ရွံနေတာလေ အာဂခွေးနော်”
သခင်က ကျွန်တော့်ဂုဏ်ပုဒ်ကို မပြတ်ဖော်ထုတ်နေတော့ ကျွန်တော်နေတောင်မနေတတ်တော့ဘူး။
အဟဲ ၀ုတ် ၀ုတ်
သခင်အပြောကောင်းမှုကြောင့် သူမက ကျွန်တော့်ကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရင်း အကဲဆတ်နေပြန်ပါသည်။ ငါ့နှယ်နော်။ ဘယ်လိုလူတွေမှန်းကိုမသိဘူး။နားလည်ရခက်လိုက်တာ ဟူး။
“အေး ပြီးရော၊ ပြီးရော မင်းဇာတ်မင်းနိုင်ရင်ပြီးရော ငါကတော့ ၀င်မကဘူးနော်”
“အာ မမကလည်း ဒီဇာတ်မှာ မမ၀င်မကလို့ မရဘူးလေ၊ ကျွန်တော်ကချစ်လို့ မွေးမလို့ သာခေါ်လာတာ ခွေးကိုဘယ်လိုပြုစုရတယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ နားမလည်ဘူး”
သူ့စကားကြားရတာ အားရှိစရာ၊ ဒီအိမ်ရောက်ကတည်းက နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုဆိုနေကြတာ၊ လူသားတွေရဲ့ စိတ်ဟာထွေပြားလှပါလား။
“ခွေးလေးက ချစ်စရာလေးပါ မမရယ်၊ အသန့်လည်းကြိုက်တယ်၊ လိမ်လည်းလိမ္မာတယ်”
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ဟုတ်တယ် ၀ုတ် .. ၀ုတ် . ၀ုတ် ဗိုက်လည်းဆာလှပြီ၊ ကျွေးပါတော့ဗျို့ ၀ုတ် ၀ုတ်
ယောက်ယက်ခတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အမူအရာကို သတိထားမိသွားတဲ့ သခင်က
“ကဲပါ မမရယ် ကုသိုလ်ရပါတယ်၊ ဂျက်ကီလည်း ဗိုက်ဆာရောပေ့ါ။
သခင်က ပြောပြောဆိုဆိုနှင့်မျက်နှာလွှဲ ခံပစ်ထွက်သွားလေသည်။
စိတ်ရှုပ်စရာတွေအပြည့်သိပ်နေသော သည်အိမ်ကြီးမှ လူအများကြားမှာ ဘယ်လောက်ဝဋ်ခံရမည်မသိပါ၊
ဒါမှ ဒီဝဋ်ကြွေးက မြန်မြန်လွတ်မှာ
မမဆိုသော အမျိုးသမီးက ဇလုံတစ်ခုအတွင်းသို့ ထမင်းနှင့်ဟင်းထည့်ကာ အသေအချာနယ်ဖတ်နေပေသည်။
ကျွန်တော့်ရှေ့သို့ ပန်းကန်ရောက်သည်နှင့် ၀မ်းက ဟာနေတာမို့ ခေါင်းမဖော်တန်းတီးလိုက်တာ စောစောကသောကများအလိုအလျှောက် ပြေပျောက်သွားလေတော့သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါတို့တတွေဟာပြည့်စုံကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာတွေသာ ဖူလုံနေရင် သောကဆိုတာ အစအနတောင်ရှာမတွေ့တဲ့အရာဖြစ်သွားရောလား။
အိမ်မှုကိစ္စများကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲတတ်သည်ဟုထင်ရသော သူမကတစ်ဆက်တည်းမှာပင် ကျွန်တော့်ရှေ့သို့ ရေခွက်တစ်ခွက်ချရင်း . .
“သောက် ခွေးလေး၊ သောက်၊ ၀အောင်သာသောက် ၊မင်းသခင်က လေကတော့ အရမ်းဖြူးတာ၊ လက်ကြောတော့ တစ်စက်မှမတင်းဘူး။
အခုလည်း မင်းကိုခေါ်လာတဲ့နာရီပိုင်းလေးမှာတင် ငါ့လက်ထဲလွှဲသွားတာပဲကြည့်”
ကျွန်တော့်ကို သူမရဲ့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တစ်ယောက်လို တိုင်တည်နေတာကြည့်ရင်း ရေကို အငမ်းမရ တပြတ်ပြတ်ငုံ့သောက်နေလိုက်သည်။
ပလပ် . .ပလပ် . ပလပ်
လူတွေဟာ ကိုယ့်စိတ်ထဲ မကျေနပ်တာရှိရင် ဒီလိုပဲ ဗျစ်တောက်၊ ဗျစ်တောက် မြည်တွန်တတ်သလား။
ကျွန်တော်တို့ခွေးတွေမှာ ဒီလိုအကျင့်မရှိတာ တော်တော်နားငြီးသက်သာလိုက်တာ၊
ကဲဗျာ စဉ်းစားလေ၊ စိတ်ရှုပ်လေဖြစ်တာမို့ အိပ်တာပဲကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော့်အိမ်ထဲကို မျက်စိဝေ့၀ိုက်ကစားလိုက်ရင်း ဧည့်ခန်းထဲရှိ လည်သာဆိုဖာကြီးများကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ဟာ ရှယ်ပဲ အိပ်လိုက်ရရင် ဇိမ်ပဲ၊ ကဲ ---စဉ်းစားနေရင် ကြာတယ်၊ အခုပဲ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်မယ်။
ဧည့်ခန်းထဲသို့ဖတ်ကနဲ ပြေးဝင်သွားသော ကျွန်တော့်ကိုရုတ်တရက်ကြောင်ကြည့်နေပြီး ဆက်တီပေါ်သို့ လွှားခနဲ ခုန်တက်လိုက်သောအခါမှ ထိုအမျိုးသမီးက အော်ဟစ်ကာ မောင်းထုတ်လေတော့သည်။
“ဒီခွေးကတော့လေ၊ စိတ်ညစ်တာပဲ ကိုဖြိုး
ဒီမှာ မင်းခွေးက အဆင့်ကျော်လာပြီ၊ ဘယ့်နှယ် ဧည့်ကောင်း၊ ဆောင်ကောင်းထိုင်တဲ့ဆက်တီအကောင်းစားတွေပေါ်မှာ ခွေးအမွှေးတွေကပ်ကုန်ပါပြီ”
ဟု အဆက်မပြတ်အော်နေတာမို့ ကျွန်တော်နားညီးလာသည်။
ထိုစဉ်မှာပင် “ ကိုရေ ဆေးသောက်ချိန်ရောက်ပြီ၊ ဆေးလာတိုက်တော့”ဧည့်ခန်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းမှ တံခါးသည် ငြင်သာစွာဟသွားသည်။
ခြေသံတရှပ်ရှပ်နှင့်ဗိုက်ကလေးကိုင်ကာ အခန်းထဲမှ တစ်လှမ်းချင်းထွက်လာသော ကိုယ်လေးလက်ဝန်နှင့် မမချောချောတစ်ယောက် တံခါးပွင့်ပွင့်ချင်း ကျွန်တော်လည်း စိတ်ရှုပ်နေတာမို့လွတ်လာကျွတ်ရာအခန်းထဲသို့ လှစ်ခနဲပြေးဝင်သွားတော့သည်။
“ဟယ် ခွေးလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ၊ သန့်နေတာပဲ”မမက အသံချိုချိုလေးနဲ့ ပြောပြီး ကျွန်တော့်ကို လိုက်ဖမ်းတော့သည်။
ကျွန်တော်ကလည်းရောက်ရောက်ချင်း ဇောာက်နဲ့ထွင်းခံ ထားရတော့ မမကိုလည်း လန့်နေတာပေါ့၊
အခန်းထဲမှာ ဟိုထောင့်ပြေးကပ်၊ ဒီထောင့်ပြေးကပ်နဲ့ တစ်ယောက်တည်း အဲလေ တစ်ကောင်တည်း ယောက်ယတ်ခတ်နေ တော့တာပါပဲ။
၀ုန်းဒိုင်းကြဲ ဆူညံသံစဉ်တွေထွက်ပေါ်လာတော့ ပြေးရင်းမှ အနေအထားအမှန် ကို သဘောပေါက်လာတယ်။
ပြေးရတာလည်းမောလာတော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပဲ ခြေပစ်လှဲချပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ မမလည်း ကျွန်တော့်ဘေးထိုင်ချရင်း ကျွန်တော့်ကျောလေးကို တဟောဟောနဲ့ အမောဖြေရင်း သပ်ပေးရှာတယ်။
သြော် လိုက်သူ ရှိတော့ပြေးတယ်
မရနိုင်မှန်း သိတာကို အတင်းလိုချင်တယ်။
ရလည်း သွားရော တန်ဖိုးမထားတော့ပြန်ဘူး .......။
ငါ့မှာ ဗိုက်ကြီးတကားကားနဲ့ လိုက်ရတာမလွယ်ဘူး မောလိုက်တာ၊ ဟောဟဲ ......ဟောဟဲ”
အင်း ! အခုမှပဲ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ အေးချမ်းမှုရတော့တယ်။ ဒီအိမ်ကိုရောက်တာ၊ နာရီပိုင်းလေးမှာပဲ မျိုးစုံလွဲနေတာ၊ အခုမှပဲတည့်တော့တယ် ဟူး ......။
ဇိမ်ယူမှိန်းနေရင်းမှ ဖျတ်ခနဲလန့်ကာ ၀ုန်းခနဲထပြီး ကုတင်အောက်သို့ တရှူးထိုး ပြေးဝင်မိသည်။ သာသနာဖျက်ပြန်ပြီ။
“အောင်မယ်လေး! မီမီရယ်၊ ခွေးနဲ့လက်ပွန်းတတီးမနေနဲ့လေ၊
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်ဆိုတာ အစစအရာရာဆင်ခြင်ရတယ်။ ခွေးမှာရှိတဲ့ ပိုးမွှားတွေက ညည်းနှာခေါင်းထဲဝင်ပြီး ရောဂါတွေ ရကုန်မှ ဒုက္ခတွေများကုန်မယ်”
အသံကြောင့် ကုတင်အောက်ကနေ ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့ ဆေးဆိုးပန်းရိုက် အဖွားကြီးမျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ လာပြန်ပြီ ....။
“ဟုတ်တယ်အမေရေ၊ အခုပဲ ဧည့်ခန်းထဲမှာ သောင်းကျန်းသွားလို့ ရှင်းလို့ပြီးရုံရှိသေး တယ်။ ဒီအခန်းထဲမှာ လာမွှေနေပြန်ပြီ”
တောက်! ကျုပ်စိတ်တွေသည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ စိတ်ရှိလက်ရှိကုန်းအော်ပစ်လိုက်တယ်။
မွှေတာက ကျုပ်မဟုတ်ဘူး၊ ခင်ဗျားတို့ ---
၀ုတ်ဝုတ် ဘယ်နှယ့်ဗျာ ကျုပ်ဘာသာ ကျုပ်ရဲ့အမျိုးတွေ ဘော်ဒါတွေနဲ့အတူတူ ကျုပ်တို့ ကမ္ဘာလေးမှာ ပျော်နေတဲ့ ဥစ္စာ၊
သူတို့လို လူပိန်းတွေပဲ ကျုပ်တို့ကို ဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်ပြီး ကားအကောင်းစားကြီးတွေနဲ့ အလျှိုလျှိုအိမ်ခေါ်သွားကြ၊
ကျုပ်မှာတော့ အဖေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ ပါသွားတာကိုကြည့်ပြီး အားကျနေတာ။
ဖွတ် ! တက်တက်စင်အောင်လွဲပါ ပေါ့။ ဂိန် .......။
ဆိုင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ အသက်ရှူကြပ်လှပြီးလို့ထင်တာ အခုတော့ အဖိုးတန်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒီအိမ်အကျယ်ကြီးကမှ အသက်ရှူစရာနေရာတောင် မရှိလောက် အောင်ပဲ .....ဟူး .....။
“ဆူညံ ဆူညံနဲ့ အခန်းထဲမှာ ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ? ”
ဟော ! ကယ်တင်ရှင် သခင်လေးအသံပါလား။
သခင်လေးက ကျွန်တော့်ကိုမတွေ့တော့ရှာနေပြီ။ ကျွန်တော်ကုတင်အောက်မှာရှိကြောင်း အချက်ပြလိုက်ဦးမှ၊ သခင်လေးရေ၊
ကျွန်တော်ဒီမှာ ၀ုတ် ၀ုတ် ၀ုတ် ၊
ကျွန်တော့်အသံကြားတော့ သခင်လေးက ကုတင်အောက်ကို ကုန်းပြီးရှာနေတယ်!
“ဂျက်ကီ၊ အို့ အို့ အို့ ၊ ဂျက်ကီ လာ လာ လာ၊ အို့ အို့”
ကျွန်တော်လည်း သခင်လေးအားကိုးရှိတော့ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။
ခုတင်အပြင်ကို ရောက်တော့ အားပါးပါး၊ ခွေနေရတာ ညောင်းလိုက်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ဦးမှ။
“ဟဲ့ ! ဟဲ့ ခါပြန်ပြီ၊ ခွေးအမွးတွေနဲ့တော့ ပြသနာပဲ”
“ကဲ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ ဂျက်ကီကို သက်သက်ခွဲထားမှဖြစ်တော့မယ်။ ဒီနေ့တော့ သားအခန်းထဲမှာ ခေါ်သိပ်လိုက်မယ်။ နောက်ရက်ကျမှ ဂိုထောင်ထဲမှာ ခွဲထားပေးမယ်။ အမေ ကျေနပ်ပါတော့ ..”
လူ့စိတ်တွေကလည်း အမျိုးမျိုးနားလည်ရခက်လိုက်တာ ......။
ခွေးပဲဗျာ နေချင်သလို နေမှာပေါ့၊ အိပ်ချင်ရာအိပ်၊ စားချင်ရာစား၊ ဘာအပူအပင်မှမရှိဘူး
ကဲ ဒီလောက် ကောင်းတဲ့ခွေးဘ၀မှာ ဒီအိမ်ကိုရောက်မှပဲ ဟိုမှာနေ နေပြန်ပြီ၊ ဒီမှာအိပ် အိပ်ပြန်ပြီ၊ ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ဘ၀ကြီးဗျာ .......။
“ကို ----ဂျက်ကီကို မီမီ တို့ ဗီရိုရှေ့မှာပဲ အခင်းလေးနဲ့ သိပ်လိုက်မယ်နော်”
စေတနာရှင် မမဗိုက်က ကျွန်တော်ကျောချဖို့နေရာချပေးတော့မှပဲ သက်သာရာရတော့တယ်။ ဟိုအဘွားကြီးသားအမိလည်း ပေစောင်း၊ ပေစောင်းနဲ့ ကြည့်ပြီးထွက်သွားပြီ၊ မျက်စိကိုအေး သွားတာပဲ ။ သခင်လေးကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ သူကလည်း သူ့မိန်းမ မမဗိုက်စကားကို နာခံသည့်အလား ပြုံးပြီးငြိမ်နေတယ်ခင်ဗျ၊
သြော်! အကောင်းအဆိုးယှဉ်လျှက် ပြိုင်နေတဲ့ မျဉ်းဖြောင့်ဆိုတဲ့ လောကကြီးမှာ ကျွန်တော့်ကို လိုလားနှစ်သက်၊ လက်ခံတဲ့သူရှိသလို မလိုလားတဲ့သူလည်းရှိနိုင်တာပါပဲ။
ဒါဟာ လောက ဓမ္မတာပဲလေ ......
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဥပေက္ခာမျက်ဝန်းဒဏ်၊ သံယောဇဉ်မျက်ဝန်းဒဏ်တို့အား နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဝေခံစားရင်း ဒီအိမ်ကြီးနဲ့ နေသားကျလာစပြုနေပါပြီ!
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ အဘွားကြီး၏ ငါးကန်မှ ငါးကလေးများအားဆော့ကစားရင်း ငါးလေးများဘ၀ပြောင်းသွားသဖြင့် သူမလေမုန်တိုင်း ဒဏ်အားရက်အတော်ကြာအောင် ခံလိုက်ရသေးသည်။
“ဗျို့ ကိုဖြိုး ကိုဖြိုး ရှိပါသလားခင်ဗျာ”
ခြံတံခါးဝရှိ Bell အား အဆက်မပြတ်နှိပ်ရင်း တကြော်ကြော်အော်နေသော လူစိမ်း(၂)ယောက် အား တွေ့ရလေသည်။
ရာဂျားနဲ့ စကားပြောနေပြီး တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ခြေလှမ်းကျဲကြီးတွေနဲ့ ခြံထဲကိုဝင်လာပုံတွေကိုလည်း ကြည့်ပါဦး ......။
တစ်ယောက်က အရပ်ကလန်ကလားမှာ အသားကခပ်ညိုညို၊ မျက်စိပေါက်ပြူးပြူးနဲ့ အသားအရေက ရောဂါသည်လို ပိန်ခြောက်ခြောက်။
နောက်တစ်ယောက်ကျပြန်တော့ အသားတော့ ဖြူပါရဲ့၊
စူထွက်နေတဲ့ ဗိုက်က နေ့စေ့လစေ့ ဘီယာဗိုက်၊ မျက်နှာကလည်း ဆီတ၀င်းဝင်းနဲ့ ရမ္မက်ဇောကပ်နေတဲ့ တဏ္ဍာရူးရုပ်၊
ဒါပေမယ့် သပ်သပ်ရပ်ရပ်။ အဖိုးတန် ၀တ်စားထားပုံတွေနဲ့ ဟန်ကျပန်ကျ ကိုင်ထားသောလက်ကိုင်ဖုန်းများက သူတို့ရဲ့ အကျည်းတန်မှုတွေကို ဖုံးကွယ်ထားစေပါသည်။
သခင်လေးရဲ့ ဧည့်သည်တွေထင်ပါရဲ့၊ မမက ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ခိုင်းပြီး ခဏစောင့်ဖို့ပြော နေတယ်။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကျီစယ်လိုက်ဦးမယ်၊ ဝေါင်း ........။
မမ အအေးဗန်းကိုင်ထွက်လာတော့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ မြင်ကွင်းက ဆီးကြိုနေသည်။ ဧည့်သည်လူစိမ်းနှစ်ယောက် ဆက်တီပေါ်ကိုခြေထောက်နှစ်ချောင်းတင်ပြီး နံရံကပ်လျှက် ဇောချွေးကလေးများစို့ကာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတာကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ကျေနပ်နေတာဗျာ! ၀ုတ် ၀ုတ် ......။
“ဂျက်ကီ ဘာကုတ်ချောင်း ကုတ်ချောင်းလုက်နေတာလဲ၊ သွား ........G0”
အဲဒီအချိန်မှာ သခင်လေးရဲ့ အသံမာမာကိုကြားလိုက်ရတော့ အသာလေးအမြီးကုတ်နေလိုက်ပြီး မသာမယာကြည့်နေလိုက်ရတယ်။
“ကိုဥက္ကာရယ် ကျွန်တော့်တို့ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လက်တွဲလာတာ နှစ်တွေမနည်းတော့ ဘူးဗျာ။ ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကို အမှန်အတိုင်းခင်ဗျားနားလည်နေတာပဲ၊ ခင်ဗျားကို ယုံလို့လည်း အရင်ဦးဆုံး ခေါ်ပြတာပေါ့ဗျာ”
“ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုဖြိုးဝေလင်းရယ် ။
ကျူပ်ကလည်း စီးပွားရေးလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ပါ၊ ဥက္ကာထက် ဆိုရင် လူတိုင်းခေါင်းညိတ်ပြီးသားဆိုတာ ခင်ဗျားသိပါတယ်”
ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော် မသူတော်လုပ်နေသည့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ အပေါစားကိုယ်ကျင့်သီလများဖြင့် ဖျပ်ဖျပ်လူးနေသော သူ့ဆီမှ ခုန်ထွန်လာသည့် လောဘဇောဆန်ဆန် မျက်လုံးများက ကစဉ့်ကလျားရွေ့လျားနေသည်။
“ပစ္စည်းကတော့ မဆိုးပါဘူး။ ဈေးအတွက်တော့ အချိန်ယူရလိမ့်မယ်။ ကဲ ကျွန်တော်ချိန်ထားတာလေးရှိလို့ သွားလိုက်ဦးမယ်၊ နောက်မှ ဆုံကြတာပေါ့”
ထိုအချိန်တွင် နေမင်းသည် သူ့တာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီမို့ အလင်းရောင်ကို မှုတ်ငြိမ်း လိုက်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး အမှောင် ပါးပါးလေး ခြုံလွှမ်းစပြုလေပြီ။
မှောင်မိုက်သော သန်းခေါင်ညရဲ့အလယ်မှာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအပ်ကျသံ ပင် မကြားရလောက်အောင် ငြိမ်သက်နေလေရဲ့။
အိမ်သားအားလုံးလည်း တစ်နေကုန် တစ်နေခမ်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဒဏ်ကြောင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေကြပါသည်။
ညအမှောင်ကို ခွင်းထွက်လာသော ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်အသံကြောင့် ဖျတ်ခနဲလန့်နိုးလာရသည်။ တရှုပ်ရှုပ်အသံကြီးက ကျွန်တော်အသိကိုလှုပ်နှိုးလိုက်သလိုပါ။
အသံက နီးကပ်လာတာ ကြောင့် ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့ ........
ခြံတံခါးကြီးကို ကျော်ဝင်လာ တဲ့ပုံစံပဲ။
ဟိုကောင် ရာဂျားက တော်တော်လေးစိတ်ချရပါလား။
ကုလားသေ ကုလားမော အိပ်ပျော်နေလိုက်တာ။
ကျွန်တော်လည်း ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမယ်မှန်းမသိတာနဲ့ အသာလေးငြိမ်နေလိုက်တယ်။ တော်ကြာ ကျွန်တော့်ကိုပါ အန္တရာယ်ပေးသွားမှဒုက္ခ ......
ဥစ္စာမက်တဲ့ လူတွေရဲ့ ပစ္စည်းကုန်ပစေ၊ ဒါမှမှတ်မှာ။
“ဂလောက်”ဆိုတဲ့ အသံအုံအုံလေး ကို ကြားလိုက်ရတယ်!
ဟား ! မဟုတ်သေးပါဘူး။
အခု အချိန်မှာ သူတို့ကျွေးတဲ့ ထမင်းစားပြီး အသက်ရှင်နေရတာပဲလေ .......။
သူခိုးဗျို့! သူခိုး ၀ုတ် ၀ုတ် ၀ုတ် ၀ုတ် ၀ုတ်
ကျွန်တော်လည်း အာခေါင်ခြစ်ပြီး လည်ချောင်းကွဲမတတ်အော်ပစ်လိုက်တော့တယ်။
အိမ်ကြီးပေါ်က လူတွေမနိုးနိုးအောင် အသံ ထပ်ချဲ့ပြီး ဟောင်ပေးလိုက်တယ် ........
၀ုတ် ၀ုတ် !
ဟောင်သံကြောင့် သူခိုးတွေ ယောက်ယတ်ခတ်ကုန်တော့တယ်
၊ အိမ်ထဲက မီးတွေလင်းလာပြီ !
အဲဒီတော့မှ ရာဂျာလည်း ပုဆိုးစကိုင်ပြီး အယောင်ယောင် အမှားမှားနဲ့ နိုးလာတယ်။
“ဂျက်ကီ အရမ်းဟောင်နေတယ်၊ ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး”
“ သူခိုးဗျို့၊ သူခိုး၊ ခြံထဲကို သူခိုးရောက်နေလို့၊ သူခိုး ...သူခိုး”
အိမ်တံခါးမကြီးကို ကျော်လွန်လို့ အိမ်ထဲကိုရောက်ခါနီးနေတဲ့ သူခိုးတွေလည်း ၀ရုန်းသုန်းကားပြေးဖို့ ကြံပေမယ့် ရာဂျားက ၀ါးလုံးဆွဲပြီး ပြေးရိုက်တာမို့ အိမ်ထဲမှ ပြေးထွက်လာသော အိမ်သားများ၏ အသံမှာ ပွက်လောရိုက်သွားသည်။
“ရာဂျား၊ ဒီ သူခိုးတွေကို မိအောင်ဖမ်း၊ မလွတ်စေနဲ့”
စားရခါနီးမှ အမဲသဲနဲ့ပက်ဆိုသလို ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ကျွန်တော့်ကို အစိမ်းလိုက်ဝါး စားတော့မယ့် မျက်နှာပေးနဲ့ တောက်ခေါက်သံကြောင့် သခင်လေးရဲ့ အံ့သြတကြီးအသံကြီးက စူးစူးဝါးဝါး ပေါ်ထွက်လာသည်။
“ ဟာ ကိုဥက္ကာ ခင်ဗျားဗျာ ရိုင်းလိုက်တာ။
ခင်ဗျား အဆင့်အတန်းနဲ့ ဒီလိုလုပ်ဖို့တော့ မကောင်းပါဘူး။”
“ရာဂျား သွား ဒီကောင်တွေကို ရဲစခန်းပို့ဖို့လုပ်လိုက်၊ တော်သေးတာပေါ့။ နောက်ကျော ဓားနဲ့ထိုးမယ့်သူမှန်း စောစောသိလိုက်ရလို့၊ ဟာကွာ၊ ငါလုပ်လိုက်ရ”
“ကိုဖြိုး မလုပ်နဲ့ သူ့ဇယားနဲ့သူ သွားလိမ့်မယ်”
သြော် ! လူတွေ လူတွေ အလကားနေရင်း လောဘတွေကို စိုက်ပျိုးနေကြပါလား။
အိမ်သား အားလုံးရဲ့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြည့်တွေက ကျွန်တော့်ဆီကို စုပြုံရောက်လာကြပါသည်။
တကယ်တမ်းတော့ ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဟာ လောဘကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ လိုချင်တပ်မက်မှုတွေကြောင့် ကြမ်းတမ်းလာတယ်။
မကောင်းမှုကို ကျူးလွန်ဖို့ ၀န်မလေးကြတော့ဘူး။
ကိုယ့်ကိုပတ်ဝန်းကျင်က ယုံကြည်ချက်တွေအားလုံးဟာ လောဘမှိုင်းမိပြီး မွှန်ထူသွားတတ်ကြပြန်သေးတယ်!
မေတ္တာဆိုတာ လူနဲ့ တိရစ္ဆာန်ကြားမှာတောင် ရောင်ပြန်ဟပ်သေးတာပဲ။ လူသားအချင်းချင်းမှာသာဆိုရင် .........။
လောကမှာ အပေးသမားက များများပြန်ရတတ်ပြီး အယူသမားက များများဆုံးရှုံးရတတ်တယ်ဆိုတာ လက်ခံ၊ နှလုံးသွင်းနိုင်ရင် ကျေနပ်စရာသိပ်ကောင်းမှာပဲဗျာ ။
( “အလင်္ကာဝတ်ရည်ဂျာနယ်” )
များများ ပြန်မရရင်တော့ ပီတိလေးတွေကို စားသုံးခွင့်ရချင်လို့ပါ။
မေတ္တာဆိုတာ တကယ်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်တာမို့ ကောင်းတာကိုဘဲ လုပ်ချင်၊ မျှဝေချင်မိပါတယ်..
စာရေးကောင်းတဲ့ ညီမလေး ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ပါစေနော်